Kufunga Kwakanaka Kupfurikidza neWiricheya | Karman® Mawiricheya
Positive Vibes ndizvo Zvaunoda Kuti Uchengete
Isu tinonzwisisa kuti kuvharirwa kune a wiricheya zuva rakawanda rinogona kukonzera vanhu vazhinji kunzwa vakasurukirwa. Iwe unongo fanirwa kupfuura iwo ese akanaka ekurwisa zvakashata. Fara iwe uri mupenyu uye uchifema. Kune akawanda mawiricheya makirabhu iwe unogona kujoina kusimudza mweya wako uye kuwana rutsigiro rwaungangonzwa iwe rwaunoda. Nzvimbo yakanakisa yekuvaka yako yakanaka vibes ndeye kuburikidza nemhuri uye shamwari nekuti vanokuziva iwe mushe uye ivo vanoziva zvinoita kuti ufare. Tine zvakare zvinyorwa zvakawanda zvakanyorwa pane akasiyana zviitiko uye itsva zvekuvaraidza zvaunogona kupinda mazviri kuti ubatsire kuwedzera mafungiro ako. Zvese zviitiko uye zvakasiyana zvekuvaraidza.
Zvinokanganisa kubva kuNegativity
Iko kune zvirokwazvo nzira dzakawanda dzekusefa kunze kwekushaya hanya uye kuva zvishoma zvishoma zvakanaka. Nzira yakanakisa ndeyekutanga nenzira yaunofunga nezvazvo. Kugara pazvinhu zvisina kunaka zvinogona kungoita kuti zviwedzere. Pane zvekunze zviitiko zvaunogona kuita zvinonakidza kwazvo. Muenzaniso weizvi unenge uri bowling uye bowling mutambo unochinja we vanoshandisa wiricheya zvinoreva kuti chero wiricheya mushandisi anogona kutora chikamu. Mumwe muenzaniso wekunze kwekunakidzwa chiitiko kuenda kumamuseum. Isu zvakare tine chinyorwa chakanyorwa nezve mamuseum uye kuti akakwana sei wiricheya-yakasungwa vashandisi. Mamiziyamu anonakidza nekuti iwe unosvika pakukoshesa nzira iyo maartist akasiyana anozviratidza kuburikidza nehunyanzvi. Ivo vari muUnited States yose uye vanenge vakasununguka. Google ivo kushandisa yako padyo nenzvimbo yekutarisa vepedyo kwauri.
Shamwari uye mhuri vanogona kunge vari iro rakanyanya kunaka rubatsiro kuti ugare uine tariro nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Chimwe chikonzero ndechekuti vanokuzivai mushe. Ivo vanoziva zvinoita iwe kuti ufare uye chii chisingafadze. Sezvo shamwari dzako uye nhengo dzemhuri dzichikuziva ivo vanogona zvinopa rutsigiro rwakanakisisa. Kana usiri padhuze nepadyo newe unogona zvakare kujoina nharaunda dzemawiricheya kusangana nevanhu vari zvakare wiricheya yakasungwa. Kana iwe usingade chero eaya mazano saka iwe unogona kungozvikurudzira pachako pasina rubatsiro rweumwe kunze kwemukadzi wako kana murume kana zvikaitika kuti wakaroora.
Isu tinotumira zvinyorwa zvezuva nezuva kwechikamu chikuru uye tinovimba ivo kupa kukosha kune vanoona neimwe nzira kana imwe. Zvinyorwa izvi zvine misoro yakawanda dzakasiyana, kwete chete misoro ine chekuita ne mavhiripu nekuti tinoda kuzvisanganisa nemwi varume. Sezvo yega yega positi iri musoro wenyaya zuva rega rega, tinoda kunzwa kubva kunemi varume uye ndezvipi zvimwe zvamungade kuverenga nezvazvo? Iwe unogona kuratidza chero chinhu uye kana isu tikawana iyo pfungwa yakakodzera ipapo isu tichagadzira chinyorwa cheyako pfungwa. Iwe unogona zvakare kutumira email iyo pfungwa kune yedu yekuonana chikamu cheiyo webhusaiti chero ipi inoshanda zvakanyanya kwauri.